"BMW X3 ရယူရန်" အနိုင်ရရှိသူများကြေငြာခြင်း
ကံထူးရှင်များကိုမကြေငြာမှီ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများနှင့် ဤပရိုမိုးရှင်းဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသူများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ထောင်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောလူလို့သည် ဤနှစ်သစ်လက်ဆောင်ပေးပွဲတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး ၄င်းကို အမှန်တစ်ကယ်ကိုသူမတူပဲအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပွဲတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မည်သူကနောက်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူဖြစ်လာပြီး အသစ်စက်စက် BMW X3 တစ်စီးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သလဲ?
အဓိကဆု ဇိမ်ခံ BMW X3 တစ်စီးဟာ မအေငျဒိုနီးရှားင်းအဝယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mohammad Agus Soleh Kafabillah ဆီကိုသွားလိုက်ပါပြီ! ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင်ကံကောင်းပါပြီ!
အားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ပြီးတော့ လက်ဆောင်ပေးပွဲဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်! ဤခဏတာပျော်ရွှင်မှုကို FBS မှအရောင်းအဝယ်သမားများနှင့် အကျိုးတူဆောင်ရွက်သူများကို ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေပေးလိုက်ရအောင်။
နောင်လာမယ့်ပရိုမိုးရှင်းများကို မလွတ်စေပဲ သင်ကိုယ်တိုင်အနိုင်ရရှိရန် ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့မမေ့ပါနဲ့။ သတိရပါ၊ FBS နှင့်အတူ မည်သူမဆိုအနိုင်ရရှိနိုင်ပါတယ်!